Ukusingathwa kwendle kanye ne-Sludge Ukwelashwa - i-Hielscher
I-biogas ikhiqizwa emithonjeni, njengemfucuza kamasipala, i-sludge yamanzi, i-muck noma umquba. I-Ultrasonication ithuthukisa ukugaywa kwezinto ezinjalo eziphilayo eziholele ku-biogas engaphezulu kanye namasclude amancane asele.
I-biogas yindlela yokwehla kwezinto eziphilayo nge-anaerobic noma i-aerobic bacteria. Ihlanganisa ngokuyinhloko i-methane, i-carbon dioxide ne-hydrogen sulfide. Lokhu kwenza i-biogas ibe yindlela evuselelekayo yezinto eziphilayo, njengegesi yemvelo.
Izindleko zamandla kanye nezindleko zokulahlwa kwamakhemikhali kanye namashukela, umthetho wezemvelo kanye nezinye izinto ezithandayo, njengokunciphisa ukukhishwa kwamakha evuthayo kudinga izitshalo zokwelashwa ezingcolile ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwazo kahle. Ukungena kwe-ultrasonic kwezinto eziphilayo ngaphambi kokugaya kungcono ukukhiqiza kwe-biogas kakhulu. Kanye nalo sonication ngcono ngcono dewaterability of the sludge futhi kunciphisa inani sludge residual ukuba zilahlwe.
Izindleko zokukhiqizwa kwe-biogas yizingxube zezinto ezihlukahlukene nezihlanganisiwe, izintambo, amagciwane nama-bacteria, i-cellulose nezinye izinto ezingavamile. Imfucuza yokudla, imfucuza yemvelo kanye neyentengiselwano, njengamafutha noma i-vinasse yizinto zokudla ezengeziwe zokudla okuyi-mesophilic ne-thermophilic digesters. I-cavitation ye-Ultrasonic ibulala izakhiwo nama-cell structures. Ngenxa yomphumela ku-sakhiwo esakhiweni se-sludge ingasetshenziswa kalula. Ngaphezu kwalokho, ukuchithwa kwama-aggregates kanye nezindonga zamangqamuzana kuthuthukisa ukutholakala kokutholakala kwempahla ye-intracellular ukuze kuguqulwe amabhaktheriya.
Kusukela ngo-1999, i-Hielscher ibilokhu ihlinzeka izinhlelo zokuqothulwa kwe-ultrasonic ezifinyelela ku-48kW amandla ahlukene ezikhungweni zokwelashwa kwamanzi ahlukahlukeneyo kanye nasezindaweni zokunakekelwa kwemfucuza kamasipala kanye nezamabhizinisi emhlabeni jikelele. Ezinye zalezi zinhlelo zithuthukise isivuno se-biogas ngo-25%.
Itafula ngakwesokudla ibonisa izidingo zamandla ezijwayelekile zokugeleza kwevolumu ehlukahlukene. Uhlelo lwe-ultrasonic luvame ukudidiyelwa ngaphakathi ngaphambi kokudla ku-digester. Ngaphandle kwalokho, izinto eziphilayo zingabuyekezwa kusukela ku-digester ngokusebenzisa isimiso se-ultrasonic emuva ku-digester. Ngakho-ke, isinyathelo se-ultrasonication singasetshenziselwa kalula ezintweni ezikhona.
200 – I-800L / hr
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics ekusetshenzisweni kwe-sludge nemifudlana yemfucuza kungaphumelela imiphumela ehlukahlukene, njenge:
Ukwandisa isivuno se-biogas
Ukuthuthukiswa kokuziphatha kwe-sedimentation ngenxa yokungena kwe-degassing ne-flake
Ukuthuthukiswa kwe-C / N-ratio yokuchasisa
Ukuthuthukiswa kwe-sludge ukuqina
Ukugaya nokuthuthukisa ukungena kwamanzi
Ukunciphisa inani lemifolothi
Izindleko zokulahla ezenzansi ngenxa yokunciphisa uhla lwamanzi ngemuva kokugaya
Ukunciphisa ipolisi edingekayo
Ukubhujiswa kwama-bacterial filamentous
Sincoma ukuziphatha kwezilingo zokuhlola izilinganiso isib, ngokusebenzisa izinhlelo ezi-1 kuya ku-4kW. Lokhu kuzobonisa imiphumela jikelele kanye nokuthuthukiswa kwenqubo yakho ethile yokusakaza. Sizojabula ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sincoma izinyathelo ezengeziwe.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ukuthuthukisa ukungcola nokugaya amanzi.
48kW I-Sludge Disintegration
24 x I-UIP2000hd (2kW)
6 x I-UIP2000hd (2kW)
I-7kW Ultrasonication System
7 x I-UIP1000hd (1kW)
Umthelela wokuqothulwa kwesifo sokuthuthwa kwamanzi okuthuthwa kwamanzi okuthuthwa kwamanzi ukuze kusetshenziswe ukugaya kwe-Anaerobic